Sahy Nangata-bady Ampahibemaso Ny Olon-tiany Ity Vehivavy Sinoa Mpihira Ity · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2015 17:05 GMT
Saripika nalaina tao amin'ny YouTube. Nangataka hivady tamin'ny olon-tiany ilay vehivavy Sinoa mpihira Zhang Liangying nandritra ny fiakarany an-tsehatra ny 4 Jolay.
Tratran'ny tsy nampoizina ny vohikala Sinoa rehefa nangata-bady ampahibemaso ny olon-tiany Feng Ke, Talen'orinasa mpampialavoly iray, ilay mpihira Zhang Liangying, 30 taona, nandritra ny seho an-tsehatra tany Changsha ny 4 Jolay.
Mbola tsy mahazatra an'ireo vehivavy any Shina ny manao ny dingana voalohany anatin'ny fiarahan'olon-droa. Ny lehilahy matetika no mangataka ny vehivavy hiaraka aminy, ary izy ihany koa no voalohany mangataka ny hivady. Ary tsy vaovao ny mahita ireo vehivavy miresaka malalaka momba ny fahatratrarany ny faha-telopolo taonany ka mbola mahatokatena azy. Rehefa tsy manambady ireo vehivavy anatin'ny faha-30 taonany, dia azo antsoina amin'ny fomba manaratsy hoe “vehivavy sisan'olona” na shengnü amin'ny teny Sinoa.
Saingy tsy voafaritra araka izay hita hatramin'izay ireo anjara asan'ny lahy sy ny vavy any Shina. Ary mampiseho izany fiovàna izany ny fangatahana ampahibemaso nataon'i Zhang, izay hanononany ny taonany.
Miaraka amin'ny ranomaso mameno ny masony, nilaza izao tamim-pihetseham-po izy tamin'ny faran'ilay seho an-tsehatra:
Te-hiteny aho fa teo anelanelan'ireo taona faran'ny 18-30 tanatin'ny androm-piainako, tsy niandry aho, satria nisy olona foana teo ho ahy. […] 30 taona aho izao, eto Changsha indray aho ankehitriny. Te-hanao izay zavatra tiako natao tamin'izaho 20 aho. Nandinika lalina aho, ary tsy te-ho tokatena. Tanatin'ireo 10 taona lasa, nanaraka ahy teny ianareo mpankafy, ary nanaraka ahy ihany koa io olona io. Tapaka ny hevitro, raha te-haka vady ahy ianao izao, miakara fotsiny eto amin'ny sehatra.
Nanatona azy teny amin'ny sehatra ny olon-tiany avy eo ka namihina mafy azy ary nanoroka azy nandritra ny fotoana maharitra. Nitosaka ny tehatehak'ireo mpankafy an'i Zhang.
Avy eo, maro ireo olona niady hevitra mikasika ny fanekena na tsia ny fanaovan'ny vehivavy ny dingana voalohany anatin'ny fiarahan'olon-droa. Tanatin'ny pejy fanehoan-kevitry ny gazety iray mifandray amin'ny antoko politikan'ny governemanta,The Beijing News, mametram-panontaniana an'ireo tsikera miampanga an'i Zhang ho manararaotra sy mampisehoseho ny olon-tiany mpanarivo ny lahatsoratra nosoratan'i Hou Hongbin. Nanohana ny fihetsik'i Zhang ilay lahatsoratra “Tena manararaotra ireo lehilahy tokoa ve ireo vehivavy mangataka fanambadiana?“:
Fantatro fa nilaza ireo manam-pahaizana sasany malaza amin'ny resa-pitiavana fa — [anatinà fiarahana amin'ny lehilahy] tsy tokony ny vehivavy no hanao ny dingana voalohany, raha tsy izany dia ho tsy misy vidiny izy ireo, ary voahozona hilaozan'ireo lehilahy. Mitovy amin'ny filazana ihany koa io fandehan-javatra io fa, raha oharina amin'ny lehilahy, tsy tokony hanan-karena kokoa ny vehivavy, na manana marim-pahaizana avo kokoa, na mahay kokoa. Tokony hody hambany noho ny lehilahy ny vehivavy, raha tsy izany dia hahatsapa tsindry izy ireo, hahatsiaro ho ambany lanja ka hankahala ireo vehivavy.
Tamin'ny voalohany, nihevitra aho fa mety nahamenatra ny tenany ny fihetsik'i Zhang Liangying. Saingy ankehitriny, mampamirapiratra azy izany. Niady efa aman-taonany maro ireo vehivavy ary tamin'ny farany dia lasa andriamanitra vavy [kintana]. Tsy te-hanana ny fiainana nindraindrainy hatrizay ve ireo vehivavy ireo? Tsy te-hisafidy ireo anton'asa sy namana tsy mahafohy izay hiaraka androso sy hiala sasatra miaraka ve izy ireo?
Mandray ny toerana mifanohitra amin'izay ireo mpitsikera sasany. Tanatin'ny tsikerany tao amin'ny Weibo (mitovy amin'ny Twitter any Shina), nanamarika ny risika mety hisy eo amin'ny fangataham-bady ataon'ny vehivavy ny mpampiasa iray izay nanahy:
Anatin'ny traikefa ananako nandritra ny 13 taona niainako, raha misy lehilahy te-haka vady anao, tsy maintsy mandroso ny resaka aminao izy na miresaka aminao momba ny andron'ny fanambadiana. Tsy ilaina mihitsy ny vehivavy mampiseho mazava na manome sopapa ilay lehilahy. Ireo vehivavy namako, izay nanery ny olon-tiany haka vady azy, dia niafara tamin'ny fisarahana na nahomby, saingy ity vehivavy [izay nahomby tamin'ny fangatahany vady] ity dia latsa-danja ao anatin'ny fianakaviana. Ry zatovovavy, mba diniho ny teniko. Mety hisy ireo sasantsasany hahomby amin'ny fangataham-bady, saingy vitsy izany.
Tsy misy trano, tsy misy fanambadiana
Tanatin'ireo taona 1960, ny porofon'ny fahavononan'ny lehilahy hanambady dia ny fikarakarany ireto “zavatra fototra telo ilaina” ireto na ny sandajian (三大件) – famantaranora, bisikileta ary onjam-peo. Koa satria nihazakazaka ny fitomboan'ny toekaren'i Shina tanatin'ireo folo taona faramparany, ankehitriny, lasa trano, fiarakodia, ary antontam-bola goavana ny sandajian.
Ny “Tsy misy trano, tsy misy fanambadiana” no lasa hafatry ny cardinaly ho an'ireo lehilahy Sinoa. Araka ny fanisàna navoakanà vohikala iray fitadiavana olon-tiana ao Shina tamin'ny 2014, manodidina ny 71.8% ireo vehivavy no nihevitra fa mendrika ny hivady amin'ny lehilahy manana trano izy ireo. Saingy mampihoroho ny ankamaroan'ireo lehilahy tokatena any Shina ny haavon'ny vidin'ny trano. Ho an'ireo lehilahy Sinoa maro tsy manana trano hitoeran'ny fitiavana, toa tsy inoana ny hizoran'ny fiarahana hankany amin'ny fanambadiana.
Noho ireo trangan-zavatra ireo, mampahery ireo vehivavy ho sahisahy kokoa ity lahatsoratra ity manoloana ny fangataham-panambadiana:
Ny tena marina, ny antony — tsy itiavan'ireo lehilahy miresaka momba ny fanambadiana amin'ny vehivavy — dia tsy sanatria manohitra ny fanambadiana izy ireo, fa kosa manahy ny tsy hanana harena hahafahana mampiadana ireo vehivavy. Raha izany fandehany izany, tokony havitrika “hangata-bady” ireo vehivavy. Amin'ny alàlan'ny fandavahana ny varavarankely vita avy amin'ny taratasy, manome toky ireo lehilahy ny vehivavy fa mila [mizotra amin'ny] fanambadiana izy ireo.